အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများနွေအမှတ်6- အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ်6နွေ 2018
အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်း၏နွေအမှတ်6ထုတ်ဝေမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အပုံပြင်များနှင့်သတင်းအများကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်တွစ်တာစာကျွေးခြင်းနှင့်လည်းအိမ်စာမကျြနှာပျေါမှာအပတ်စဉ်ဘလော့ဂ်များနှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်ထားပါ။
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာလှပသောချယ်ရီပွင့်ဒီပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်အစောပိုင်းဧပြီလအဲဒီမှာတက်ရောက်ခဲ့သည်ရုံကို Global ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကသာရက်အနည်းငယ်အကြာကဒီမှာ Edinburgh အတွက်အထွတ်အထိပ်အပွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အပြုအမူစွဲအပေါ် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ
Porn Warning - ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Facebook နှင့် Youtube
တစ် ဦး ကဝမ်းနည်းနှုတ်ဆက်
သင်တို့သည်နောက်သံသယသင်သည်သူတို့၏ဒေတာဘေ့စဖို့အတွက်ရွေးချယ်ရန်သင့်အားတောင်းခံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှမှတ်စုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှထံမှကြားနာသိမ်းထားချင်လျှင်ကောင်းပြီ, သင်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ဆီကလက်ခံရရှိမည်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
ကျနော်တို့ Edinburgh အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယခုအပတ်အပေါ်တစ်ရက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အထွေထွေ Practitioner-အသိအမှတ်ပြုလေးခုတော်ဝင်ကောလိပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီး၏ပထမဦးဆုံးပွေးလေ၏။ အောက်ပါသုံးရာယူပါလိမ့်မယ် လန်ဒန်, မန်ချက်စတာနှင့်ဘာမင်ဂမ် လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း။ ယခုအချိန်အထိဆရာဝန်များကကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိသည်ဟုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်အတူပါ ၀ င်သောအမျိုးသားလူနာများကြီးထွားလာသည်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည် (နှောင့်နှေးသည့်သုက်လွှတ်ခြင်း) (မကြာခဏအပြည့်အ ၀ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရှေ့ပြေး) anorgasmia (မစွမ်းဆောင်နိုင်မှု) အော်ဂဇင်မှ) နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသူ့ဟာသူ။
ဤသည်ကိုသာအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပျက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာအခမဲ့, အမာခံ porn ၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာလွန်းသည်အခြားအထောက်အကူပြုအချက်များဖြစ်ပေမယ့်အဓိကတရားခံဘို့ငါတို့ပိုက်ဆံအခမဲ့ streaming အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါဆရာဝန်များက Viagra နှင့်အလားတူ erectile တိုးမြှင့်ဆေးဝါးများ, ကိစ္စကိုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့အများကြီးကိစ္စများတွင်လည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလည်းသတိထားမိကြသည်။ သူတို့အလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးအကြောင်းပြချက်ပြဿနာ "မခါးပတ်ကိုအောက်တွင်" ဖြစ်ပါတယ်, ဆိုလိုသည်မှာသွေးစီးဆင်းမှုအထီးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကြောင့်အများဆုံးအရေးပါသောအဖို့, ဒါပေမယ့် "သူတို့ငှက်ပျောသီးရန်" ဦးနှောက်ကနေအာရုံကြောအချက်ပြ၏နှောင့်အယှက်အကြောင်းကိုမဟုတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဂယ်ရီ Wilson ကယ့်ရယ်စရာနှင့်သိကောင်းစရာများ TEDx ဆွေးနွေးချက်ဒီအပေါ် "ဒီဂရိတ် Porn စမ်းသပ်မှု" မြင်ကြပြီမဟုတ်ပါကကြည့်ရှု ဒီမှာ.
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုယောဂီဟာသူတို့ရဲ့မိန်းမောတွေဝေစေခြင်းငှါ, အစဉ်အဆက်-တိုးပွားလာသုတေသနကနေလေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်အဘယ်သို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု '' အရာ '' ဖြစ်ပြီး, အများကြီးအသက်ကြီးနှင့်အတူဆက်စပ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော။ ဤ ဆောင်းပါး ခြားနားချက်ကရှင်းပြသည်။ ဒီနေရာတွင်လည်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တင်ဆက်မှု သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုအများကြီးနှင့်အတူပညာရေးမှနောက်ခံပေါ်မှာ။
သငျသညျအတိုအသိပေးစာမှာရရှိနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသိစေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်ရှိသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှတက်လက်မှတ်ထိုးပေးပါ။ ကျနော်တို့နှောင်းပိုင်းတွင် 2018 အတွက်မကြာမီအနာဂတ်ရက်စွဲများကြော်ငြာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူမာရိသညျရှပ်တစ်ဦးလည်း (Lucy Cavendish ကကောလိပ်, ကိန်းဘရစ်သမ္မတဂျက်ကီအက်ရှလေဖိတ်ကြားထားပြီး ဂေါကလူကြီး ကြာသပတေးနေ့7အပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်နိုင်ငံရေးအထုတ်လွှင့်အင်ဒရူး Marr ၏ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်နှင့်ဇနီး)th ဇွန်လ 2018 ။ မြင် ဒီမှာ အသေးစိတ်ကို။ ဒါဟာအခမဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်လာကြ။
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းဂုဏ်သိက္ခာမှာစကားပြောက၎င်း၏ပွဲဦးထွက်အောင်ဝမ်းသာခဲ့ ICBA ညီလာခံ ologပြီလ ၂၃ မှ ၂၅ ရက်အထိ Cologne, ဂျာမနီတွင်ကျင်းပသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသုတေသနကိုပြသရန် ICBA သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှထိပ်တန်းအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်စိတ်ပညာရှင်များကိုခေါ်ဆောင်လာသည်။ TED ဖြစ်ရပ်များသည်သင်၏နှလုံးသားကိုစားပစ်လိုက်သည်။ ဤသည်မှာစစ်မှန်သောနောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်မှုကိုတွေ့ရှိရမည့်နေရာဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုခြင်း၏ခြုံငုံဖော်ပြချက်ကိုပါမောက္ခ Stark ကအဓိကကျသောဟောပြောချက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ masterclass ဖြစ်ခဲ့သည်။
Darryl Mead လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယနေ့လူထုဆက်သွယ်ရေးအပေါ်မေတ္တာရဲ့အလုပ်ပေးအပ်သည်။ သူကကျောင်းများ၌အကြှနျုပျတို့၏သက်သေအထောက်အထား-based သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, ရှေ့နေများ, လူထု, ကျွန်နှင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက်ကလိုအပ်သောသူတို့အားလက်လှမ်းသိပ္ပံပညာရှင်များ၏လုပျငနျးအောင်အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ဤသည်ဣသရေလအမျိုး၌ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ICBA conference မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါဝင်သည်။
သင်ဤ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူစိတ်ဝင်စားလျှင်, ငါတို့သည်သင်ထုတ်ဝေသူထံမှစက္ကူဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ link ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ဝေသဘောတူညီချက်သာအခမဲ့အုပ်ရေတစ်ကန့်သတ်အရေအတွက်ကရရှိနိုင်ပါလုပ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂျာနယ်အတွက်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအတွက် 2018 ကွန်ဖရင့်စာရွက်များပေါ်တွင်အခြေခံအသစ်တခုပြန်လည်သုံးသပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့မျှော်လင့်ထား လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive.
သင်တစ်ဦးဆရာသို့မဟုတ်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအတွက်မဟုတ်ရင်စိတ်ဝင်စားလျှင်, သင်အကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener လို့ခေါ်တဲ့ tool အသစ်အတွက်တန်ဖိုးကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ဒါဟာဒီနှစ် ICBA conference မှာထင်ရှားဘဏ္ဍာများထဲမှဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ငါတို့သည်ဟုခေါ်တော့ဘူး, အသေးစိတ် Screener အကြံပြုခဲ့ကြ ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး 18 မေးခွန်းနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ဒီကိရိယာအသစ်ငါးမျှသာရှိပါတယ်။ The အကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener အထွေထွေ Practitioner ပုံမှန် NHS ချိန်းအတွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်လုံလောက်သောအမြန်သော tool ကိုပေးကမ်းခြင်း၌သိသိသာသာအောင်မြင်မှုများဖြစ်လှပါတယ်။
ငါတို့သည်ဤအံ့သြဖွယ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှနှစ်သက်သောခဲ့ကြသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကမ္ဘာတဝှမ်းအဓိကအဖွဲ့အစည်းတွေဆီကနေ 600 တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်ပညာရှင်များကျော်နှင့်အတူ။ ဆွေးနွေးပွဲ Facebook ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်းနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်ခဲ့ကြသည်။ သငျသညျ * ပါမောက္ခ GAIL ထမင်းစားခန်း, ယဉ်ကျေးမှု Reframed တည်ထောင်သူစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ, ခြားနားချက်ကိုရှင်းပြအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲနှင့်လစ်ဘရယ်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအကြား, ယခင်ဖြစ်ခြင်း Anti-porn, အဆုံးစွန်သောလိုလားသူ porn ဖြစ်ခြင်း။
သင်တို့သည်လည်း Backpage.com, လိင်များအတွက် site ပေါ်တွင်တစ်ဦး 15 နှစ်အရွယ်အဖြစ်ထိုနေ့ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ကြော်ငြာ, မိခင်တစ်ဦးသည်အဘယ်သူ၏ 15 နှစ်အရွယ်သမီးအခြား 21 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးအားဖြင့်ဆောင်ဖို့ခံခဲ့ရသည်၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် rending နှလုံးနားထောင်နိုင်သည် အလုပျသမား, အဘယ်သူကိုအများအပြားလူကုန်ကူးခဲ့သညျ။ သူမ၏ဘမ်းသွားချုပ်သူမ၏မိခင်ရဲဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူတို့အပျေါခဲ့ကြဖူးသဘောပေါက်မတိုင်မီသူမသည်အများအပြားယောက်ျားတို့ကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိသားစုမတိုင်မီဒုက္ခမဆိုကြင်နာခဲ့ဘယ်တော့မှင်နှင့်ကောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ကျောင်းသားခဲ့သူတစ်ဦး၏သမီးနှင့်အတူအပိုငျးပိုငျးဖွင့်ကောက်နေကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အဖြစ် featured ဂျိန်း Doe (အဘယ်သူမျှမ။ 3) လူကုန်ကူးမှုအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို။
ငါတို့လည်းအလုပ်များနေကြတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အပေါ်အတွေးအခေါ်များကိုမျှဝေရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှပါ ၀ င်သူ ၅၀ ခန့်နှင့်အပြာစာပေနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ NCOSE အဖွဲ့အစည်းအတွက်တစ်ခုလုံးအစီရင်ခံစာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောအသုံး ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းခဲ့သည်။ လူတစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်မီပြသနိုင်သောကျန်းမာရေးသတိပေးချက်များကိုချဉ်းကပ်ပုံအသစ်တစ်ခုကိုပြသည့်စက္ကူတစ်ရွက်ကိုလည်းစီးကရက် packets များမှသတိပေးချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလာမည့် item ၌ဤအကြောင်းပိုမို။
Edinburgh တက္ကသိုလ်အနုပညာကောလိပ်မှကျောင်းသားများသည်Rပြီလတွင် Reward Foundation အတွက်အထူးပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထိခိုက်နစ်နာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ စီးကရက် packets များရှိကျန်းမာရေးသတိပေးချက်များနှင့်ဆင်တူသည့် porn porn အစီအစဉ်များတွင်ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်ထားရန်အကြံဥာဏ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည်။ ဒီစိတ်ကူးကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Edinburgh တက္ကသိုလ်မှအနုပညာကောလိပ်ရှိဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရသည့်အတွက် ၀ မ်းသာသည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၂၀-၃၀ စက္ကန့်ဒုတိယရုပ်ရှင်ကိုဤနည်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏သင်တန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့သည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရလဒ်အသက်ရှုဆည်းပူးနေခဲ့ကြသည်။ ဤမြင့်မားဖန်တီးမှုကျောင်းသားများကိုထံမှ 12 တင်ပြချက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှတဆင့်ထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရဖို့ထိုသို့သောဂုဏ်အသရေဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမတူကွဲပြားမှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်သူတို့နွေးနွေးထွေးထွေးလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်ရှိရာဝါရှင်တန်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ရက်တွင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ 200 ကိုယ်စားလှယ်များထက်ပိုမိုသူတို့ကို၏ခြောက်လပြသနိုင်ဖို့ဝမ်းသာခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိမူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအချို့သည်ဤလုပ်ငန်းအပေါ်တက်လိုက်လျှောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။
မာရိကရှပ်မှပြန်လာသော Nolan တိုက်ရိုက် မတ်လ ၇ ရက် ၂၀၁၈ တွင် BBC မြောက်အိုင်ယာလန်ရှိ BBC မြောက်ပိုင်းတွင်ကြည့်ရှုပါ။ ဤအစီအစဉ်သည်ဤအပိုင်း၏ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံသို့သွားမည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှုကိုမာရိသည်အိမ်ရှင်စတီဖင်နိုလ်လန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး တို့နှင့်အတူစိတ်ရောဂါနှင့်ကာယကျန်းမာရေးအပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယခင်သတင်းလွှာတွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူမာရိသညျရှပ် Glasgow အတွက် Strathclyde တက္ကသိုလ်အခြေစိုက် CYCJ ၏တွဲဖက်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်၏ဆောင်ပုဒ်မှာမိမိတို့နှစ်စဉ် conference မှာ "ဟုအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်အပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု" ပေါ်တွင်သူမ၏သမီးကညာကိုမိန့်ခွန်းပူဇော်ဖို့ဝမ်းသာခဲ့ မီးခိုးရောင်ဆဲလ်များနှင့်အကျဉ်းထောင်ဆဲလ်။ ဤသည်ဘဲလ်ဖတ်အတွက် Nolan တိုက်ရိုက်တီဗီဖြစ်ရပ်အဖြစ်ထိုနေ့ရာအရပျကိုယူ။
လူအပေါင်းတို့သည်တင်ပြချက်များကနေဆလိုက်ရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ နှင့် Mary ၏ဟောပြောချက်သည် P.85-end မှစတင်သည်။ ယနေ့စကော့တလန်တွင်ရာဇ ၀ တ်မှုတရားစီရင်ရေးကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါ ၀ င်နေသောအခြားသုတေသီများ၊
ကျနော်တို့မဩဝါဒပေးနေသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ကျွန်တော် feature ရှိရာအခြားဖြစ်ရပ်များအပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်က Facebook စာမျက်နှာကိုကြေညာဖို့နှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလင့်ထားသောဖို့အခမဲ့ခံစားရ ဒီမှာ.
သင်သည်လည်းငါတို့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကပေါ်တိုဗီဒီယိုများ၏အသေးစားရွေးချယ်ရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် ယူကျု့ချန်နယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့ကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည့်များစွာသောအင်တာဗျူးများကိုတည်းဖြတ်များအတွက်အစီအစဉ်ရှိသည်အဖြစ်လာပဒေသာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဆက်ဆံရေးမေတ္တာ ပွောဆို "လိင်စွဲလမ်း" အတွက်အကူအညီရှာကြံလူများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေနဲ့ကူညီဖို့ပိုပြီးလုပ်ဖို့ NHS ထွက်သည်ကိုခေါ်။ ဒါဟာဘီဘီစီအားဖြင့်သတင်းအစီရင်ခံစာကြည့်ဖို့တားခဲ့ပါတယ်နှင့်အခြားမီဒီယာဆိုင်များတွင်ကဲ့သို့သော '' လိင်စွဲလမ်း '' အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောမဟုတ်ဘဲ compulsive စောင့်ကြည့် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ, ဆီသို့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ အမာခံ porn ရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းအချို့ 10 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘရော့ဘန်းကနေတဆင့်အခမဲ့အလွယ်တကူရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်တိုင်အောင်, ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကိုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် '' လိင်စွဲလမ်း '' အဖြစ်လိင်ကုထုံးသင်တန်းခွဲခြား။
သို့သော်ယနေ့လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်မသင့်လျော်တော့ပါ။ ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချသောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သိပ္ပံပညာကိုလျစ်လျူရှုရန်ရွေးချယ်ကြပြီး၊ လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောကိစ္စမရှိကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များဖြင့်အခိုင်အမာပြောဆိုကြသည်။ အဲဒီအစားသူတို့ဟာမီဒီယာရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုကို Harvey Weinstein (သို့) Tiger Woods လိုနာမည်ကြီးတွေဆီကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒါကချမ်းသာတဲ့လူရဲ့မကောင်းတဲ့အပြုအမူအတွက်အကြောင်းပြချက်ပဲ။ ICBA ကွန်ဖရင့်၌အနည်းဆုံးသုတေသနစာတမ်း ၃ ခုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်မှာလိင်လုပ်သားများသို့မဟုတ်အခြားအရာများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများခံစားနေရသောများစွာသောလူများသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြofနာရှိသည်။
A သဘောတူ ယင်းအတွက်ဦးဆောင်ပညာရှင် ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏မကြာမီထုတ်ဝေမည့်နိုင်ငံတကာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားမှု 11th edition တွင်ပါ ၀ င်ရန်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးပါ ၀ င်မည့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအမျိုးအစားသစ်ကိုထောက်ပံ့ပါ။ ၎င်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါကဤတမင်ကြံစည်မှုရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
ဒါဟာလက်၌စမတ်ဖုန်းကနေတဆင့်မြင့်မားလှုံ့ဆော် porn ဖို့အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်အစစ်အမှန်အသက်တာ၌မိတ်ဖက်ထဲကရှာကြံပြီးတော့လိင်အဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားနေထက် compulsive အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဦးဆောင်လမ်းပြမယ့်ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ဆိုလိုတာပါ။ ကျနော်တို့ကဒီဒေသမှာရှိတဲ့သတင်းသမားတွေပညာပေးကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာ။
ဤဥပဒေအသစ်သည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်သက်ရောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းထံမှအလွန်ရှင်းလင်းသော၊ အလွန်ရှင်းလင်းသောဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခု ယောဟနျသ Carr က ဒီဗြိတိန်၌သားသမီးတို့အဘို့အရေးပါတဲ့နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းသည်အဘယ်ကြောင့်၏ဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။
ကျွန်တော်သင်ပေးသောအရာကို၏အဓိကမှာဆက်ဆံရေးမေတ္တာရှင်သောမေတ္တာနှင့်အမျှသာညာဘက်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့ဖြတ်သန်းကွာဖြစ်သူ Kenneth ဂျွန်နဲ့ဒေါရစ်အိုင်ဗီ Mead က The ဆုကြေး Foundation ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ၏မိဘများ, Darryl Mead ကထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒီနှစ် 74 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ်သူတို့ရဲ့ 19th မင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပတ်လည်ဆင်နွှဲဖို့သြစတြေးလျ၌သူတို့ကိုပူးပေါင်းခဲ့ကြရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ သာသုံးပတ်အကြာတွင်သို့သော်ကဲန် 94 နှစ်ပေါင်းနုအသက်အရွယ်မှာမိမိအိပ်စက်ခြင်းအတွက်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ dot, 93, ကဲန်များအတွက်နေသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏ချစ်သူတို့အပြီးတွင်နေ့ကြာသပတေးနေ့, 8 ရက်သတ္တပတ်သူမ၏အိပ်စက်ခြင်းအတွက်တိတ်တဆိတ်ဒီအတိတ်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူမကသူ့ကိုမရှိဘဲဘဝကိုမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။
ဒါဟာအရေးယူမတ်ေတာစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆည်းကပ်မြင်နေပေမယ့်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမြဲထောက်ခံ, ကုမ္ပဏီခံစား, ထိုနှစ်ပါးကို သိ. အခှငျ့ထူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဲန်ရဲ့ဟာသလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏လိမ္မာအလှည့်နှင့် Dot ရဲ့တိတ်ဆိတ်ကြော့နှင့်စတိုင်လက်လွတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မကြာမြင့်စွာပျော်ရွှင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘာ, 2012 အတွက် Darryl ငါ့မင်္ဂလာဆောင်၏နေ့၌ Dot မေးတဲ့အခါသူမကငြင်းခုန်ဘယ်တော့မှမ "ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ "အကြောင်းငြင်းခုံရကျိုးနပ်ဘာမျှရှိပါတယ်။ ငါချစ်ရတဲ့မိခင်-In-ဥပဒအရမ်းချစ်ပြီးပြန်လာအတွက်အလွန်ကိုခစျြသူအနေဖြင့်ပညာ၏အဲဒီစကားအပေါ်သွားဝမ်းသာတယ်။ ထိုသို့ထက်အများကြီးပိုကောင်းမရပါဘူး။
အဆိုပါအရည်ပျော် Pot,5နှင်းဆီလမ်းရှိ
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ဦးစားပေးကို update or ဒီစာရင်းထဲကနေနှုတ်ထွက်.